प्रकाशित मिति २५ माघ २०७५, शुक्रबार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल माघ २५ गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३९ सिल्लाथ्व तदनुसार सन् २०१९ फेब्रुवरी ८ तारिक शुक्लपक्ष तृतीया तिथि विहान ७ वजेर ४९ मिनेटसम्म उप्रान्त चतुर्थी तिथि,पूर्वभाद्रा नक्षत्र मध्यान्ह १२ वजेर ५५ मिनेटसम्म उप्रान्त उत्तरभाद्रा नक्षत्र,शिवयोग, गरकरण,आनन्दादियोग ध्वाँक्ष,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा मीन राशीमा । विहान ७ वजेर ४९ मिनेटसम्म योगिनी आग्नेय कोणमा उप्रान्त नैऋत्य कोणमा,काल आग्नेय र पाश वायव्य कोणमा एवं चन्द्रमा उत्तर दिशामा भ्रमण गर्ने छन् । उत्तरको यात्रा शुभ रहला ।
राहुकालः–अशुभ विहान १० वजेर ५६ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर १८ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह ३ वजेर ३ मिनेटबाट ४ वजेर २६ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य विहान ८ वजेर १० मिनेटबाट ९ वजेर ३३ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान ८ वजेर ५९ मिनेटबाट ९ वजेर ४४ मिनेटसम्म र मध्यान्ह १२ वजेर ४० मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर २४ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५६ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ४० मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर ११ मिनेटसम्म चर वेला,८ वजेर ११ मिनेटबाट ९ वजेर ३३ मिनेटसम्म लाभ वेला,९ वजेर ३३ मिनेटबाट १० वजेर ५६ मिनेटसम्म अमृत वेला,१० वजेर ५६ मिनेटबाट १२ वजेर १८ मिनेटसम्म काल वेला, १२ वजेर १८ मिनेटबाट १ वजेर ४१ मिनेटसम्म शुभ वेला,१ वजेर ४१ मिनेटबाट ३ वजेर ३ मिनेटसम्म रोग वेला,३ वजेर ३ मिनेटबाट ४ वजेर २६ मिनेटसम्म उद्वेग वेला र ४ वजेर २६ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म चर वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर २६ मिनेटसम्म रोग वेला,७ वजेर २६ मिनेटबाट ९वजेर ३ मिनेटसम्म काल वेला,९वजेर ३ मिनेट बाट १० वजेर ४१ मिनेटसम्म लाभ वेला,१० वजेर ४१ मिनेटबाट १२ वजेर १८ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१२ वजेर १८ मिनेटबाट १ वजेर ५६ मिनेटसम्म शुभ वेला,१ वजेर ५६ मिनेटबाट ३ वजेर ३३ मिनेटसम्म अमृत वेला,३ वजेर ३३ मिनेटबाट ५ वजेर ११ मिनेटसम्म चर र ५ वजेर ११ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म रोग वेला रहनेछ ।
मेषः– आफन्त सँग आस्था र विश्वास घट्नेछ । कुनै क्षेत्रमा पनि जर्वजस्ति नगर्नु होला । बढि महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढाउदा नोक्सान धेरै वेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अनावस्यक काममा समय खर्च हुनेछ । श्रमको मूल्य गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ सर्तक रहनु होला । लगानी नबढाउनु होला ।
वृषः– समय अनुकुल नै देखिन्छ । कार्य लगनशिलता घट्ने छैन । विश्वासको भरमा काम हुनेछन् । वौद्धिक व्यक्तित्वबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय बढ्नेछ । घरमा पारिवारिक जमघट बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । दूर्जनहरु आफ्नै बाटो लाग्ने छन् । सहयोगी सहकार्यको लागि अगाडि आउने छन् ।
मिथुनः– आर्थिक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र राम्रै देखिन्छ । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । कार्य व्यस्तता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । राजनैतिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ । बाह्य व्यक्तिको भर नपर्नु होला । आयको केहि हिस्सा मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । उधारो प्रस्ताव आउन सक्छ विश्वास नगर्नु होला ।
कर्कटः– समय सुधारोन्मुख छ लगनशिलता बढाउनु होला कामले गति लिनेछ । बाह्य कुरामा बढि ध्यान जान सक्छ जसका कारण उपलब्धि गुमाउने अवस्था आउनेछ । हेलचक्र्याई नगर्नु होला । राजनैति हतियार प्रयोग गरेर काम गर्ने सपना नदेख्नु होला । पढाई लेखाई प्रगति हुनेछ । पारिवारिक समस्यबाट पूर्ण मूक्ति मिल्ने छैन ।
सिंहः– बाधा अवरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । शरीरमा रोग व्याधिको प्रकोप बढ्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबस्था रहने छैन । कसैलाई दिएको धन डुब्न सक्छ । अरुको आशा र भरोसामा बस्दा अवसर गुम्नेछन । गलत विचारको शिकार हुनुहोला । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ ।
कन्याः– समयमा गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । हेलचक्र्याई नगरि कार्य योजना अगाडि बढाउनु होला । विदेश यात्राको सम्भावना नकार्न सकिन्न । प्रेम प्रस्ताव आउनेछ भने दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति मिल्नेछ ।
तुलाः– सहजता देखिदैन प्रतिश्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु होला केहि उपलब्धि हात लाग्नेछ । अरुले गरिदिने छन् होइन आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्नु होला । परिश्रमको अन्तिम प्रतिफल मिठो निस्कने छ । खेलाडीको लागि दिन अनुकुल देखिन्छ । साझेदारी काममा लगानी नगर्नु होला । अस्थिरतालाई त्याग्नु होला ।
वृश्चिकः– सन्तुलनमा काम गर्नु होला । आफुमा भएको उर्जाको प्रयोग गर्न सके उपलब्धि हात लाग्नेछ । कर्म प्राप्तिको लागि जमेर नै लाग्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । राज्य सँग सम्बन्धित काम विस्तारै अगाडि बढाउनु होला । अर्थ अभावको महशुस हुनेछ ।
धनुः– आर्थिक अवस्था कमजोर हुदा काम गर्न गाह्रो हुनेछ । ऋणमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ सतर्क भएर अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । फाइदा लुट्न खोज्ने कम हुने छैनन । संकट मोचन हुने देखिन्न ।
मकरः– महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढाउदा एक पटक सोचेर मात्र बढाउनु होला । अस्थिरतामा जोड नदिनु होला । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । पारिवारिक सहयोगमा उपलब्धि हात लाग्नेछ । बाहिरी व्यक्तिसँग साझेदारी गरेर काम नगर्नुहोला । ऋण लगानी नगर्नु होला ।
कुम्भः– मध्यम खालको दिन छ,लगनशिल भई काम गर्नु भयो भने आफ्नो मिशनमा पुग्न सक्नु हुनेछ नत्र विचमा नै रोकिनु हुनेछ । अरुको कुरामा विश्वास नगर्नु होला । धन आफन्त मान्छे भए नदिदा राम्रो हुनेछ । नोकरीबाट सन्तुष्टि त्यति मिल्ने छैन । निर्माण व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । वोलीको कदर कम हुनेछ ।
मिनः– दिन अनुकुल देखिन्छ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । समयमा परिश्रमपूर्व गरेका काम सफल हुनेछन् । दामपत्य जीवन सामान्य सुख मिल्नेछ । सामाजिक उचाई बढ्नेछ । पराक्रम घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक होला । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ ।
महोत्तरीमा खतरनाक डकैती : १५ लाखको धनमान लुटियो, डाकासँग दोहोरो भिडन्त
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवास नगरपलिका ६ र ७ प्रेमनगरमा डकैती हुँदा लाखौँका धनमाल लुटिएको छ ।
गएराति १०-११ जनाको समुहमा…
रारा घुम्न गएका स्याङ्जा चापाकोटका मेयर कालिकोटमा कुटिए
काठमाडौं । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरी कालिकोटमा कुटिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वा्चित स्याङ्जास्थित चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिव…
पतिसँग पैसा असुल्न पूर्व प्रेमीसँग मिलेर आफ्नै अपहरण
काठमाडौं । आफ्नै श्रीमानसँग पैसा असुल्न पूर्व प्रेमीसँग मिलेर नक्कली अपहरणको योजना बनाएको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन्।
चार हजार युवालाई जागिर दिँदै शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले यसवर्ष करीब चार हजार बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउनका लागि निःशुल्क तालीम सञ्चालन गर्ने भएको छ। …
इन्जिनियरहरूको राजीनामा दिने ‘मुड’
काठमाडौँ । पुनर्निर्माणमा कार्यरत इन्जिनियरहरुले आफ्ना माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
भूकम्पमा धेरै क्षति भएका…
मेलम्चीमा कानुन लत्याउँदै ठेकेदारलाई १ अर्ब ५६ करोड क्षतिपूर्ति भुक्तानी
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा मोटो रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड…
पत्रकार अधिकारीको अन्त्येष्टि
नेताहरुको वरियता सच्याउनुपर्छ : खनाल
शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या पकरण: परिवारले दियो किटानी जाहेरी
प्रहरीलाई गाली गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
चाँदीसहित एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ
शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बलात्कारका घटनामा संलग्न ३ जना पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओली फेरि सिंगापुर जाँदै !
पत्रकार लामिछानेको समर्थनमा मकवानपुरमा पनि -याली
२० वर्षीया प्रहरी जवानको शंकास्पद मृत्यु, ३० वर्षीया प्रेमिका नियन्त्रणमा
‘मेरो पद अर्को संसदीय निर्वाचन पछि मात्रै जान्छ’- प्रधानमन्त्री ओली
चट्याङ लागेर ६१ वटा भेडाको मृत्यु
प्रधानमन्त्री ओली फेरि सिंगापुर जाँदै ! 30 views
ससुरा बा ! (कथा) 27 views
खाना ढिलो ल्याएको भन्दै ग्राहकले गाेली हानी वेटरको हत्या गरे 16 views
२० वर्षीया प्रहरी जवानको शंकास्पद मृत्यु, ३० वर्षीया प्रेमिका नियन्त्रणमा 14 views
शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या पकरण: परिवारले दियो किटानी जाहेरी 13 views
जिल्ला नै तोकेर मौसमविदले भने- सतर्क रहनू, भारी वर्षाको सम्भावना 11 views
बालमन्दिरकै निर्देशकले साढे ४ लाखमा विदेशीलाई बेचे शिशु 10 views
यसरी गरिन्छ पोर्न फिल्मको शुटिङ9views
‘मेरो पद अर्को संसदीय निर्वाचन पछि मात्रै जान्छ’- प्रधानमन्त्री ओली 8 views
घाँटी रेटेर श्रीमतीको हत्या 8 views